INTEE IN LE'EG AYAAD KU KARSAN KARTAA MACMACAANKA WAKHTIGEEDA IYO SIDEE KALE AYAA LOO KARIYAA DHADHANKA: ISTICMAALKA SIRIYAALKA, XEERARKA LOO DOORTO KOOLLO, CUNTOOYINKA SUXUUNTA - KHUDRADDA
Ugu Weyn Ee Khudradda
Diyaarinta suxuunta laga soocayo macaan: intee in le'eg cunto kobcin iyada oo aan waxyeelleynin dhadhanka iyo dheefaha?
Corn waa loo yaqaan dadka ilaa 10 kun oo sano, waxaa jecel yahay quruumo badan, waxaa lagu daraa nooc kasta oo suxuunta ah oo la cuno sida oo kale. Corn waa lagu qurxiyaa dhadhanka iyo guryaha caafimaadkaba, sidaas darteed, marka xagaaga ee gees walba waxay bilaabaan inay iibiyaan cobs, way adag tahay in laga hortago in aan la iibsan oo aan la dhadhamin hadhuudh la kariyey. Waxaa ugu wanaagsan in la doorto noocyo kala duwan oo hadhuudh ah, oo loo yaqaanno sonkorta, aka ama miiska.
Maanta waxaa la aaminsan yahay in hadhuudh uu yahay warshad hadhuudh ah oo la ogaaday muddada dheer, habka loo qaddarin karo ayaa ah, in ka duwan siriyalka kale, hadhuudhka hadhuudhka ayaa loo habeeyay safafyo si taxadar leh loola jeeda.
Corn waa hodan ku ah mareeynyo kala duwan oo waa mid aad u faa'iido leh, hantidiisa waxaa loo qori karaa waqti dheer:
PP, E, D, K, B1, B2, iyo sidoo kale ascorbic acid ku jira kobcinta tiro badan.
Dalaggu wuxuu ka kooban yahay waxyaabo ay ka mid yihiin kalsiyum, fosfooraska, magnesium, birta, naxaas iyo nikkel.
Corn wuxuu sidoo kale hodan ku yahay tryptophan iyo lysine - amino acids kuwaasoo aad u faa'iido leh jirka.
Suugaanta Corn ayaa lagu talinayaa in la isticmaalo haddii ay lagama maarmaan tahay in laga saaro sunta iyo jeexjeexyada jidhka.
Waxaa cadeeyay in kuwa si joogto ah u cunaan hadhuudhka cuntada sida aan ku dhicin gabowgii hore.
Corn wuxuu ka caawiyaa ka hortagga kansarka iyo cudurada wadnaha.
Suugaanta Corn waa kuwo aad u faa'iido leh carruurta yaryar, waxay ka caawisaa in ay koraan oo jirka ku darto walxo waxtar leh.
Haddii ay dhibaato ka haysato jiritaanka mindhicirka, isticmaalka dhexdhexaadka ah ee hadhuudhku wuxuu noqon doonaa mid aad u faa'iido badan, maadaama maadooyinka ka mid ah ka hortagga habka halsano.
Sababo badan oo ka mid ah astaamaha dufanku ku badan yahay hadhuudhka, looma beddeli karo xasaasiyad, macaan, sonkorow iyo guud ahaan cudurada la xidhiidha geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka ee jirka.
Waad ku mahadsan tahay fitamiin B-ga, hadhuudhku wuxuu faa'iido u yeelanayaa hagaajinta sonkorta.
Haddii aad ku xanuunsato xanuunka qaybaha, markaa waa lagama maarmaan inaad soo bandhigto hadhuudhkaaga cuntada.
Sidoo kale, hadhuudhku wuxuu ka caawinayaa dareenka kala duwan ee jirka, tusaale ahaan, lallabbo, dawakhaad iyo daal.
Waa suurtagal in la hoos u dhigo faa'iidooyinka galleyda ee haweenka dumarka, gaar ahaan xilliga uurka iyo caadada.
Corn waa qaabka burka hadhuudhka ah ayaa loo isticmaalaa kiknoolajiyada, maxaa yeelay waxay ka caawisaa in laga takhaluso qalalan iyo dillaacista maqaarka.
Sida loo doorto?
Sidee loo doortaa hadhuudh si aad u hesho raaxada ugu badan iyo faa'iidada ka jirta isticmaalka? Calaamadahaas waa in ay taxadaraan marka hore:
Dabcan, hadhuudhka dhalinyarada waxay noqon doontaa tan ugu macaan, sidaas darteed waxa ugu wanaagsan in la cuno bisha Agoosto.
Waxaa habboon in aad si taxaddar leh u fiirsato cufsiyada midab caano ama midab huruud ah.
Haddii ay jiraan caleemo qallalan oo ku yaalla rugta, waxa fiican inaad diiddo sida iibsigaas.
Dooro hadhuudh aan lahayn hurgun aan fiicnayn.
Waxaa habboon in la fiiriyo in aysan jirin dhibco kala duwan oo hadhuudh ah, maadaama tani ay tahay calaamada ugu horeysa ee fungus.
Hadda oo ah hadhuudhka ugu wanaagsan ee la soo xushay, waa lagama maarmaan in loo diyaariyo karinta. Si habsami ah si aysan u luminin hantideeda faa'iido leh iyo dhadhanka, waxaa jira dhowr talooyin:
Ku qoyso hadhuudh biyo ah illaa hal saac, waxay ka dhigi doontaa midhaha jilicsan. Kadib markaad barareyso, ku dhaq adegyada biyo qabow.
Haddii aad weli ka soo baxdo caleemo madow ama miraha, markaa hubaal waxay u baahan yihiin in laga saaro. Haddii cagaarshuhu yar yahay, markaa waxaad ku kari kartaa midhaha hadhuudhka ah.
Si aad u sameeyso hadhuudh isku mid ah isla markaana isla wakhtigaas, dooro isla size.
Haddii hadhuudhku uusan dhalin, waa in aad ku qoydid biyo caano, haddii kale miro lagu jiro diyaarinta ayaa xitaa noqon karta mid adag oo aan dhadhan lahayn (ku saabsan sida iyo inta la isku karsaarayo hadhuudhka bisil oo ka badan, waxaanu u sheegnay qoraalkan).
Lagu taliyay. Si aad u socodsiisid dhakhso, waxaad jeexi kartaa jiilka laba qaybood.
Halkee laga bilaabaa?
Ka hor intaadan ogayn sida loo karkariyo kobcinta, waxaan sheegnaa dheriga ku habboon ee sameynta hadhuudh macaan. Ujeedooyinkaas, waxaa haboon in la helo digsi qaro weyn leh. Ma jiraan wax qalad ah oo loo baahan yahay. Kaliya dooran daawooyinka aad jeceshahay oo aad bilaabi kareyso.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo ay u sameeyaan hadhuudh macaan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dadka ugu caansan.
subag oo kale.
Waqtiga diyaargarowga: laga bilaabo 30 daqiiqo ilaa laba saacadood.
Qaado miraha maydka lagu maydho iyo maacuunta wax lagu kariyo, haddii cobsuhu aad u dheer yahay ama ballaadhan yahay, waa inaad u qaybisaa 2 qaybood. Buuxi biyo si ay hadhuudhku gabi ahaanba ugu daboolaan biyaha.
Iyadoo ay ku xiran tahay bislaanshaha, wakhtiga karinta ayaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay, si loo fahmo in ay diyaar u tahay ama aan ahayn, isku day inaad, hadhuudhku waa inuu noqdaa mid casiir leh oo jilicsan.
Dhowr daqiiqado ka hor inta aanad diyaar u ahayn, waxaad ku dari kartaa subag yar oo biyo ah si aad ugu darsato jilicsanaanta dheeraadka ah ee miraha. Ku darso milix.
Waa muhiim! Ma aha lagama maarmaan in la milbo hadhuudhka inta lagu jiro cunto karinta, maxaa yeelay miraha waxay noqon karaan kuwo adag oo aan lahayn casiir leh.
Sida loo kariyo hadhuudhka digsiga:
Waqtiga cuntada: 30 daqiiqo.
Ku shub 2 koob oo biyo ah dheriga dhoobada ama dhoobada, ku rid qeybta kululaynta sare, ku rid qashinka horay loo qooyay hal saf, inta badan 3 dhegood oo yar ayaa la dhigaa.
Waqti intee le'eg ayaad ku karsanaysaa cobqada macaantu waxay ku xiran tahay da'da hadhuudhka. Haddii cawsku aad u yar yahay, ka dibna wuxuu diyaar u yahay 15 daqiiqo, celcelis ahaan, waxay gaadhsiisan doontaa diyaargarow nus-saac (wax badan oo ku saabsan inta uu le'eg yahay iyo sida loo kariyo hadhuudhka dhalinyarada, halkan ka akhri).
Corn, nadiifin, waxaa la siin karaa saliid kareysa. Si arrintan loo sameeyo, isku walaaq subagga jilicsan leh cagaarka, toonta iyo basbaaska iyo u adeegso hadhuudhka. Saltku waa ka fiican yahay inaanu ku darin.
Baro raashinka kale ee loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudh khudradda labanlaab ah.
Waqtiga diyaarinta: illaa saacad.
Pre-karkariyo hadhuudhka ilaa inta la kariyey, dul saar on saxan iyo u daa in yar oo qabow, saliid leh saliidda cuntada.
Inkastoo hadhuudhku uu qaboojinayo, waa lagama maarmaan in la diyaariyo isku dar ah oo aad ku faafin karto hadhuudhka, ujeedkani waxaannu ku darnaa subag jilicsan, cagaarka la jarjaray, tuujin toonta iyo basbaas.
Waxaan ku faafinaynaa cobska ku yaala digsiga, ha ku darin subagga, shiil ilaa maaddada dahabiga ah, marka hadhuudhka la casriyeeyo, ku faafi saxan iyo dufan leh subag hore loo diyaariyey.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: hadhuudh.
Waqti karinta: 5 - 10 daqiiqo.
Cunto: Corn in microwave waa ka fiican si aad u kariyo si toos ah on cob. Daqiiqada ku rid 5 daqiiqo microwave, waxay qaadan kartaa waqti yar, waxay ku xiran tahay awoodda. Waannu ka baxnaa, waannu iska nadiifinnay caleemaha waana diyaar.
Haddii hadhuudh uu horey u cagaaran yahay, waxaad ku duubi kartaa tuwaal waraaqo ah oo isku laaban isla markaana si isku mid ah u kari.
Faahfaahin ku saabsan sidda si dhakhso ah loo kariyo hadhuudhka foornada mikrower ee xirmada, waxaan halkan u sheegnay.
Digriiga la karkariyay ee mikrowave 5 daqiiqo:
nus barkin oo ah subagga;
Waqti karinta: 40 daqiiqo.
Isku qas subagga, dhir iyo toon, oo walaaq.
Marka xigta, qaado hadhuudhka la dhaqay oo la qalajiyey iyo saliiday walxaha saliidda ee soo go'ay.
Ku duub koolada foornada iyo dir foornada ilaa 40 daqiiqo.
Talo soo jeedin. Sidaa darteed, waxaad sidoo kale karisaa hadhuudh dabka furan, tani waa doorasho weyn oo loogu talagalay cunto.
Faahfaahin ku saabsan sida aad u karin kareyso hadhuudhka foornada, ka akhri waxkeena.
Sidee loo kaydiyaa saxanka dhamaystiran?
Maxaa la sameeyaa haddii hadhuudh la kariyey isla markiiba la cunin? Waxaad ku kaydin kartaa siriyaalka la dhammeeyey qaboojiyaha muddo seddex maalmood ah. Si arrintan loo sameeyo, geli hadhuudhka weelka oo ku duub foornada. Waxaad ku xiran kartaa dhegta oo dhan. Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay inaad diirimaad sameyso, waxa ay si aan kala duwaneyn uga duwanaan doontaa mid cusub.
Sidoo kale hadhuudh la kariyey waa la qaboojin karaa. Si arrintan loo sameeyo, marka hore u qalaji, ku duub fiyuuska oo u soo dir qiyaasta qaboojiyaha. Waxay fiicnaan doontaa haddii qaboojiyahaaga uu leeyahay shaqeyn degdeg ah oo degdeg ah. Si aad u jabiso badeecada, kaliya ku rid qaboojiyaha, sug in ay hadhuudhku u dhalaalaan oo kuleyliyaan.
Korneel sida iyo dadka waaweyn iyo caruurta, ha dafirin naftaada inay ku cunaan. Waxa ugu muhiimsan waa in la waafajiyo dhammaan marxaladaha diyaarinta, diyaarinta iyo kaydinta alaabta.
Sida loo sameeyo hawo-qaadashada guriga hoyga
Sidee ayay halis u tahay cayayaanka iyo boodada digaagga iyo sida looga takhaluso dhiqlaha?
Soo-saaridda tufaaxa Ukraine ayaa hoos u dhacay 100%
Kaarka ganacsiga ee goobtaada - xayndaabka
Go'aaminta in ay ku hawlan tahay beerista canab, waa in maskaxda lagu hayaa in warshadani ay tahay sida liyu-u eg, oo aan lahayn qaab gaar ah, sidaas darteed waxay u baahan tahay taageero. Labadii sanno ee ugu horreysay ka dib markii laga beerto duurka canabku waxay u baahan yihiin taageero ku meel gaar ah. Laba sano kadib, waxay noqotaa lagama maarmaan in la dhiso taageero joogto ah. Read More
Echinacea: Isticmaalka, sifooyinka daaweynta iyo ka hortagga
Marka salting kaabaji on kalandarka dayaxa ee December?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudradda 2019